उहिलेको तिहार पो तिहार, अहिलेको के तिहार - विचार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
माधवप्रसाद घिमिरे काठमाडौं कार्तिक २०
गाउँ–घर चारैतिर झलमल्ल, पालामा बत्ती बलेको, गोरेटो–बाटो त्यसैगरी झलमल्ल। अहो, कस्तो आनन्द! अहिले त तिहारमा ‘न्यू इयर’ मा जति पनि रमाइलो गर्दैनन्, महत्व दिँदैनन्।
संस्कृति तुरुन्त बदलिँदैन, सभ्यता बदलिन्छ। मानिसहरु पहिले भोटो लगाउँथे, अहिले फूर्तिका साथ सर्ट, भेस्ट लगाउँछन्। हामी राष्ट्रियताको कुरा गछौँ तर, खानपान र लवाई सभ्यता पश्चिमा अपनाइरहेका छौँ। संस्कृतिसँग जीवनले प्राप्त गरेका अविस्मरणीय कुराहरु जोडिएका छन्। कुनै सिद्धान्त होलान्, कुनै प्रेमका कुरा होलान्, कुनै परम्पराका कुरा होलान्, कुनै नैतिकताका कुरा होलान्, कुनै सामाजिक नीति–नियमका कुरा होलान्।
यी कुराहरु एउटा पर्वको रुपमा देखिन्छन्। यो एउटा संस्कृति भयो। यसलाई कसरी मनाउने भन्ने बाहिरी कुरा हो तर, यसको महत्व उही रहन्छ। त्यो भित्री कुरा हो। जुन मानवीय मूल्यसँग जोडिएको हुन्छ। कुन अवस्थामा, कुन युगमा, कुन कुरा अपनाइएको थियो भन्ने एउटा पक्ष होला। तर, यस्ता पर्वहरुको आफ्नै मूल्य, मान्यता र महत्व रहेको हुन्छ। त्यसमध्ये तिहार पनि एक हो।
कृषि सभ्यताबाट आएको हो तिहार
तिहार कृषि सभ्यताको उपज हो। रमाइलोको हिसावले पनि उत्पात्तै रमाइलो चाड। अकाशभरी तारा हुन्छन्, हामी ती तारा धर्तीमा झरुन्जस्तो गछौँ। बारीमा सयपत्री, खेतमा धान, कलकल गर्ने खोला। आहा कति रमाइलो। अस्ती भर्खरैसम्म झिलिमिली रात थियो। अहिले अँधेरी रात छ। तर, तिहारले अँधेरी रातलाई झिलिमिली बनाइदिएको छ।
खसगरी कृषि सभ्यतामा मुख्य काम गर्ने को–को हुन् रु श्रम गर्ने भाइ हो, दाइ हो, जोत्ने गोरु हो, किरा फट्याङ्ग्रा आए खाइदिने काग हो, फोहर खाइदिने, कृषि उपजको रेखदेख गरिदिने कुकुर पनि हो। धेरैलाई अचम्म लाग्छ, कागको किन पुजा, कुकुरको किन पुजा भनेर। तर, यो सबै कृतज्ञताको प्रभाव हो। नत्र गोरुको किन पुजा गर्नुपथ्र्यो। गाईको पुजालाई लक्ष्मी ९धन० सँग जोडेर हेरेको पाइन्छ। यो पछि थपिएको कुरा हो। मुल कुरा कृषि सभ्यतासँगै जोडिएको छ।
दाइ–भाइले रातदिन खेतबारीमा श्रम गरेको छ। त्यहीँबाट प्राप्त अन्न खाएर धेरैले जीविका चलाएका छन्। त्यसैले उनीहरुलाई दिदी–बहिनीले टीका लगाएर पुज्ने गरेका हुन्। यस सँगसँगै यो सम्बन्धमा एउटा श्रद्धा लुकेको छ, प्रेम छ। त्यसैले हामी जति सोच–विचार गरेर चाड, पर्व र संस्कृतिलाई बुझ्ने प्रयास गछौँ, त्यहाँ उत्ति नै मानवीय मूल्य पाउँछौँ। पहिले–पहिले हामी यसरी तिहार मनाउथ्यौँ।
सेलरोटीमा लुकेको प्रेम
जुन राष्ट्रमा संस्कृति छैन, त्यहाँका नागरिकको जीवन केवल दौडधुपमा सकिन्छ। सबै पैसाको पछि लाग्छन्। हामीलाई हृदयका कुरा, मस्तिष्कका कुरा चाहिएको छ। हामी सबै मिलेर खेतबारीमा काम पनि गर्नुपर्छ, काम गरेकाहरुलाई सम्मान भाव पनि व्यक्त गर्नुपर्छ, सबै मिलेर रमाइलो ९नाचगान० पनि गर्नुपर्छ। र, यो अवसर तिहारले जुटाएको छ।
पछिल्लो समय तिहारको ऐतिहासिक महत्वमा ह्रास हुँदै आएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। निकै दुःख लाग्छ। सभ्यताको परिवर्तन यति छिटो भयो कि हामीले लगाउने दउरा–सुरुवाल, राष्ट्रिय चिन्हहरु परिवर्तन हुँदै गए। पुराको पुरैजस्तो बदलिसक्यो।
चाडपर्वमा उतिबेला सेलरोटीको कति महत्व हुन्थ्यो। घिउमा पकाएको सेलरोटी खाँदा कति मीठो हुन्थ्यो। वाह १ अहिले मीठाई पसलले अनेकथरी मीठाईहरु उत्पादन गरिरहेका छन्। कोही सेलरोटी बनाउनै जान्दैनन्, कोही अल्छी गर्छन्। सेलरोटीमा एउटा आनन्द लुकेको छ। दिदी–बहिनीले पकाएर दिएको सेलमा प्रेम लुकेको हुन्छ, आत्मीयता लुकेको हुन्छ।
उहिलेका गीतहरु सुन्दा कति आनन्द आउँथ्यो। ‘भैलेनी आइन् आँगन, हे औँसी बारो गाई तिहार भैलो।’ यसमा कति मीठास छ। सुन्दा सुनिरहुँ लाग्ने। भित्रैसम्म छुने। गाईप्रतिको उच्च सम्मान। अहिले त क्यासेट लगाएर नाच्छन्। उहिलेका मनमोहक गीत कहाँ सुन्न पाइन्छरु
धनीलाई भैले खेल्ने चिठ्ठी, गरिबलाई के?
उहिले तिहारमा धनी–गरिब भन्ने नै हुँदैनथ्यो। ‘भैलेनी आइन् आँगन, हे औँसी बारो गाई तिहार भैलो’ गाउँदै सबैको घरमा जान्थ्यौँ। गरिबहरु पनि आँगनमा भैली आएको, भैले गीतमा नाचेको देख्दा खुसी हुन्थे। आर्शिवाद दिन्थे। टपरीमा चामल राखेर, बत्ती बालेर घरमा पाकेको रोटी दिन्थे। सबैको मन खुसी हुन्थ्यो। रोटी बाँडेर खाइन्थ्यो। त्यहाँ एउटा भावनात्मक सम्बन्ध थियो।
अहिले त्यो पाइँदैन। कसले धेरै पैसा दिन्छ, को धनी छ उसको घरमा मात्र भैले खेल्न जान्छन्। हामी यति बजे आउँछौँ भनेर पहिल्यै चिठ्ठी लेखेर पठाउँछन्। के यो चाड गरिबको पनि होइन, के उसलाई पनि रमाइलो गर्ने, हेर्ने अधिकार छैन रु छ भने किन यस्तो रु कतै हामीले आफ्नो नैतिकता बेचिरहेका त छैनौँ रु हामी समानताको कुरा गछौँ तर, यस्तो भेदभावले त विचलन ल्याउँछ। तिहारको जुन सांस्कृतिक महत्व छ हामीले त्यसलाई भुल्नु हुँदैन। तिहारलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउनु पर्छ।
मानिसको जीवन गोरुजस्तै, यन्त्रजस्तै भएर जोतिनुमात्र होइन। रमाइलो पनि चाहिन्छ। त्यसो हुनाले वर्षदिनमा आउने मुख्य चाड दशैं र तिहार रमाइलो गरी, सबैसँग मिलेर, अहंकार त्यागेर मनाउनुपर्छ। हामी यो भएन, त्यो भएन भनेर देशलाई, सरकारलाई गाली गर्छौँ तर, खोई त आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, धर्म निभाएको?
ती दिन सम्झिएर आनन्द लिन्छु
उहिले हामी साथीसंगी, ईष्टमित्र, परिवारका सदस्य जम्मा भएर नाचगान गर्दै रमाइलो गथ्र्यौँ। अहिले मानिसहरु सबै एकैठाउँमा जम्मा हुन्छन् तर, आ–आफ्नै मेबाइलमा झुन्डिएर बस्छन्। रक्सी खान्छन्, होहल्ला गर्छन्, झगडा गर्छन् र सामाजिक विचलन फैलाउने काम गर्छन्। अझ यसमा गर्व गर्छन्। धर्म, संस्कृति, संस्कारको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ। खोई हामीले गरेको रु पोहर सालको भन्दा यस वर्ष रक्सीको बिक्री दोब्बर भन्ने खबरमा हामीले गर्व गर्ने अवस्था छ। यो सबै देख्दा मलाई दुःख लाग्छ। मन कटक्क खान्छ। र, पुराना ती दिनहरु सम्झिएर आनन्द लिन्छु।
गाउँ–घर चारैतिर झलमल्ल, पालामा बत्ती बलेको, गोरेटो–बाटो त्यसैगरी झलमल्ल। अहो, कस्तो आनन्द! अहिले त तिहारमा ‘न्यू इयर’ मा जति पनि रमाइलो गर्दैनन्, त्यति महत्व दिँदैनन्।
पिर्के पिङमा बसेर धर्ती छाडेको,
लिङ्गे पिङमा बसेर बच्चाहरु स्वर्ग गए भन्ने भावना बोकेको,
हाँसी खेली दुई दिन, कहाँ जान्छ यो जिन्दगानी,
को लैजाला अमरपुरमा फूलको यो जवानी!
म यस्तो गीत गाउने कवि हुँ। त्यसैले मलाई परम्परा, संस्कृति, रितिरिवाज, चाडपर्वको महत्व धेरै गहिरो छ भन्ने लाग्छ। यस्ता चाडपर्वले विशेषगरी अझ बालबालिकामा एउटा धारणा, मानसिकताको विकास गराउँछ। अग्रजहरुले जे गर्यो उनीहरूले त्यही सिक्ने हो। उनीहरुलाई सकेसम्म रमाइलो गर्न दिनुपर्छ।
उतिबेला दशैं–तिहार आउन लाग्यो भन्दा कम्ता रमाइलो हुन्थेन। अब नयाँ लुगा लगाउन पाइने भइयो, नाटक देखाउन पाइने भइयो, मीठो खान पाइने भइयो भन्ने लाग्थ्यो। घरघरमा काँक्रा चोर्न हिँडिन्थ्यो। फलानोले काँक्रा चोर्यो भनेर कसैले दुःख मनाउँदैनथे। ठिटाहरुले रमाइलै गरेछन् भन्थे। बच्चामा हामीलाई पिङमा राखेर मच्चाइदिँदा बिछट्ट रमाइलो लाग्थ्यो। रोटी, चिउरा पाउँदा दङ्ग पथ्र्यौँ। चिउराको मगमग वासना आउँथ्यो। खाँदा कति मीठो हुन्थ्यो।
मखमली फूल टिपी भाइको पगरिमा, फेरि जन्म होला कि यसै नगरिमा,
सयपत्री फूल टिपी भाइको पगरिमा, फेरि जन्म होला कि यसै नगरिमा!
कति सुन्दर गीत हुन्थ्यो। दिदी–बहिनीहरुले गीत गाउँदै, कानमा, कपालमा तेल लगाइदिँदै गरेको पल कति आनन्ददायी हुन्थ्यो। ढाका टोपी, यमराजलाई छेक्ने रेखा, आहा कति राम्रो हुन्थ्यो। आखिर यी सबैसँग मानिसको भावना जोडिने त हो नि!
प्रकाशित २० कार्तिक २०७५, मंगलबार | 2018-11-06 11:05:26
माधवप्रसाद घिमिरेबाट थप
पारदर्शी र सामाजिक रुपमा उपलब्ध मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणा दिने प्रणालीले मानिसलाई स्वच्छ आचरण गर्न अभिप्रेरित गरेर भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सक्दछ।...
११ बुँदे सहमतिको स्वागतमा दीपावली मनाउँदै सीके राउतका कार्यकर्ताले ‘स्वतन्त्र मधेस’ को नारा लगाएका छन्। यदि यही हो भने यसमा सरकारलाई नराम्रोसँग...
सरकार-सीके राउत सहमति: यसकारण दुवैका लागि रणनीतिक
सरकारले पृथकतावादी समूहलाई मूलधारमा ल्याएको भन्ने, संघर्षरत पृथकतावादी समूहले आफ्नो आन्दोलनलाई मान्यता दिएको भन्न सक्छ। किनभने, सम्झौतामा...
त्रिवि यौन दुर्व्यवहार प्रकरणमा बेलायती संस्थाको स्वार्थ
एक प्राध्यापकको पक्षमा वकालत गर्नु परिषद्को कर्तव्य होला तर एक सार्वभौम राष्ट्रका विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नै मुलुकको प्रचलित कानुनमाथि मात्र भर...
बहुदलीय जनवाद अंगिकार गर्ने कि पतन वा समाप्ति रोज्ने?
एउटाले जिते जस्तो, अर्काले हारे जस्तो नहोस् भनेर पार्टी एकतापछि जनताको बहुदलीय जनवादको नाम ‘जनताको जनवाद’ भनेका हौं। तर एकता जनताको बहुदलीय जनवादकै...